အမှတ်တရဓာတ်ပုံကို တက်တူးထိုးခဲ့ကြတဲ့ ခင်လှိုင်တို့ဇနီးမောင်နှံ
ခင်လှိုင်က ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ အတူ အမှတ်တရ ဖြစ်စေမယ့် တက်တူးပုံတွေ အတူတူ ထိုးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်. သူတို့ ဇနီးမောင်နှံကို အားကျရတဲ့ ပရိသတ်တွေ. အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းက အပေါင်းအသင်းတွေလည်း အများကြီးပါပဲ.
သရုပ်ဆောင် ခင်လှိုင်နဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ မငယ်လေးတို့က အမှတ်တရ တက်တူးလေးတွေ ထိုးခဲ့ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်. ဇနီးဖြစ်သူကတော့ သူတို့ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ယောက်ပုံ တက်တူး ထိုးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ခင်လှိုင်ကတော့ မျက်ဝန်းပုံတွေကို တက်တူးထိုးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်.
'' မနေ့ညကဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တရပုံလေးကို ထပ်တူဖြစ်အောင်ရေးပေးနိင်တဲ့ကိုဇေကြီးကိုကျေးဇူးပါ ကျွန်တော်ကတော့အကြည့်တစ်ချက်ယူခဲ့တယ်'' ဆိုပြီးတော့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ မနက် ၁၁ နာရီက သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်. အဲ့ဒီနောက် ခင်လှိုင်တို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ မင်္ဂလာဝတ်စုံနဲ့ တက်တူး ပုံတွေကိုလည်း တင်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်.
သရုပ်ဆောင် ခင်လှိုင်တစ်ယောက် မကြာခင်က ကျရောက်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ချစ်ဇနီးချော မငယ်လေးရဲ့ မွေးနေ့အမှတ်တရအတွက် ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ မွေးနေ့ ဆုတောင်းစကား ပြောခဲ့ပါသေးတယ်.
ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ပို့ ဇာတ်ရံသရုပ်ဆောင် ခင်လှိုင်ကတော့ လိုချင်တဲ့မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါလို့ဆိုပါတယ်။ သားသမီး ၃ ယောက်စလုံး ကလည်း လိမ္မာကြတယ်၊သားအကြီးဆုံးက အိမ်ထောင်ကြပြီးသွားလို့ ကလေးရနေပြီ၊ သားငယ်ကတော့ နေရဲပါ အနုပညာအလုပ်လုပ် နေတယ်၊ သမီးငယ်ကတော့ တက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ်တက်နေတယ်လို့ Duwun Media ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။